Fa maninona mihitsy i Jentilisa? | Hevitra MPANOHARIANA
Fa maninona mihitsy i Jentilisa?
2009-05-19 @ 22:26 in Andavanandro
Tratran'ny karazana hakamoana antsoina hoe miraviravy tanana aho amin'izao fotoana anoratako izao. Mba betsaka ihany anefa ny karazana fampaherezana ataon'ny namana isan-karazany na amin'ny fiainana andavanandro na an-tserasera. Tsy dia tratran'izany loatra ihany koa aho amin'ny ankapobeny fa dia azony aloha amin'izao fotoana izao.
Anarany aho no miala sasatra (noterena fa tsy voasazy tsy akory) tsy hiasa mba hananako fotoana bebe kokoa amin'ny fampitam-baovao an-tserasera saingy tena reraka tokoa angaha noho izay efa vita izay. Rehefa miasa any amin'ny asako andavanandro manko aho dia miasa 7 andro amin'ny fito andro. Tsy mino izany amin'ny ankapobeny izay tsy mahalala ny asako. Tena misy fiantraikany amin'ny toe-pahasalamana tokoa ilay izy raha ny fahatsapako azy amin'izao fotoana izao. Tsy mba manana izany andro alahady na asabotsy na andro fety igalabonana iarahana amin'ny fianakaviana izany ny tena, nefa tsy mifanaraka amin'izany akory ny karama... sady tsy mananjo hanana tambin-karama noho ny maha-andro tsy fiasana ny tena. Lasa olon-dratsy ny tena satria "ny adidy tsy an'olon-dratsy".
Ankehitriny, araka ny efa voasoratra etsy ambony, terena hanapitra ny "zonay amin'ny andro tsy iasanay rehetra izahay". Na dia ity taona ity aza dia tsy maintsy alaina avokoa. Ny ao ambadik'izany araka ny fahatsapako dia na handroaka mpiasa ny orinasa na hikatona ny orinasa afaka fotoana vitsivitsy. Na ho inona filaza azy na ho inona, misy dikany lehibe izany manapitra ny congé hatramin'ny taona 2009 izay diavina izany. Akory moa atao fa toa ny tena irery no tezitra fa ny sisan'izay samy miaro ny rambony tsy ho tapaka avokoa, nefa na izaho aza ve tsy mba tratran'izany ihany koa? Ao anatiko ao anefa manao hoe "izay te-hanavotra ny ainy no mahavery azy, fa izay mamery ny ainy...noho ny amiko... no hanavotra azy".
Ny mahavariana amin'ity tantara ity dia misy itovitovizany amin'izay mitranga ao amin'ny Telma ihany ny toe-javatra mihatra aminay. Efa hita tamin'ny haino aman-jery ihany manko fa mandroaka mpiasa maro ny ao amin'ity orinasa ity, nefa tsikaritry ny mpiasa fa mampiditra mpiasa vazaha hatrany koa ilay orinasa. Dia toa tahaka izany ihany koa ny fijeriko izay ato aminay. Tsy azo ampitomboina anefa ny fandaniana... noho izany, mba ho afaka mankaiza moa ny mpiasa malagasy kely?
Efa raisiko ho andraikitra izao soratako izao, tsy fanao velively fa mandika lalàna sy fitsipika maro nefa mba fanairana izay mpiasa mitsidika izany aterineto izany. Samy manana ny olany ny orinasa maro amin'izao fotoana izao ka samy mamaha azy araka izay tandrifiny. Efa maro ny mpiasa (eto Madagasikara) no efa mandray tapa-karama... ny fandaniana ataon'ny tena anefa tsy mihena raha miakatra kosa ny vidim-piainana. Misy aza moa (tafiditra amin'ity ny rahalahiko iray tampo amiko iray) no tsy mandray karama intsony na dia ariary aza, nefa manambady aman-janaka. Mitotongana ny fiainana e! Be aza ny mbola tsy voasoratra fa ireo rehetra ireo angamba no anisan'ny tena mahakivy ahy tanteraka amin'izao fotoana izao. Tolona sy avotra ity! Farany: Marihina fa tsy mitady fanampiana avy aminareo akory aho fa raha hanampy ianareo tsy trondro omena ahy fa harato na fintana!
Jentilisa, 20 mey 2009, amin'ny 00:27
ny adidy tsy an'olon-dratsy tokoa.
mahereza lesy eee
Nampidirin'i simp @ 22:44, 2009-05-19 [Valio]
Mitsiky honena aho manomboka mamaky ny lahatsoratr'i Jentilisa: "ndriiiy... koa raha ianao no miraviravy tànana, izahay izany tsy tokony hitsambikina avy eny ambony tetezana?", koa na dia efa tokony handeha hatory aza aho,fa nitsidika kely fotsiny satria rahampitso tsy maintsy hifoha maraina, dia nanapa-kevitra indray hoe hanoratra hanome hevitra avy hatrany.
Raha "ny adidy tsy an'olon-dratsy" hoy isika, ilay mpitondran'ny rainiboto malaza be nampihorohoro iny kosa nilaza hoe "ny asa no mahatonga ny olona ho olon'afaka". Toheriko tanteraka ny heviny sy ny zavatra nataony nefa miombon-kevitra aminy aho amin'io, saingy ny antsika mbola taratry fanjanahana @ fomba rehetra eto Madagasikara ny fepetra mifehy ny fanakaramana ny olona tokony hiasa ary tsy izao toe-javatra izao no "hiverenan'izany" fa ho fanamafisana sy fanitarana ny fanjakany fotsiny izao. Koa antony iray fanampiny izany tsy tokony hanajanonana ny tolona, hahazoana ny fahaleovan-tena marina. Indrindra izao fa miharihary fa raha niezaka ny hanome asa ho an'ny malagasy rehetra i "DADA" (satria fantatsika tsara fa azony natao koa ange ny nampiasa ny volany rehetra tany ivelany raha ny hampanankarena ny tenany fotsiny no notadiaviny e), ny saribakoly toloran'ny frantsay saina kosa dia miezaka ny manatavy ny mpibaiko azy ary mitsetsitra ny ran'ny malagasy fotsiny.
Aza kivy Jentilisa, efa nitonona ny hoe "izay te hanavotra ny ainy sns... " ihany ianao, dia tohizo ny fananana finoana sy fideràna an'Andriamanitra. Andeha vakio indray ilay ao amin'ny Matio 6,25...
Momba ny harato sy fintana, efa h@ izay nahafantarako ny aterinetinao aho no niteny irery foana hoe olona toa an'i Jentilisa mihitsy no afaka mahazo tombotsoa lehibe amin'ny adsense-n'ny google ary manontany tena aho hoe fa maninona no tsy nataonao hatrizay. Raha sanatria tsy mbola nalalininao dia jereo ny takelaka voatokana ho an'izany ao amin'ny google, ary be dia be koa ny blaogy mandalina sy miresaka ny momba an'io, toa an'ito ohatra (http://blogaffiliation.net/?p=13 ). Tandremo fotsiny momba ny resaka affiliation hafa fa mety mandany andro fotsiny satria saika miroborobo any amin'ny amerikana izy ireo fa tsy mandeha kosa amin'ny tany hafa na any Eropa aza noho ny rafitry ny fiaraha-monina sy ny fomba fisainana samy hafa.
Raha mahaliana anao moa ny hahalala bebe kokoa ny amin'io dia aza misalasala manoratra amiko fa raha izay no ahafahako mandray anjara manome harato anao dia ho faly tokoa aho hanao izany.
Alao hery, misy fotoana mandrahona fa hiposaka foana ihany ny masoandro avy eo, mitondra hazavana ho anao ihany koa.
Nampidirin'i gasi @ 00:51, 2009-05-20 [Valio]
Henjana ny lalao e! Na izany aza aza manaiky miditra mambra ao @ HAT mihitsy fa tsy hateza io!lol
Nampidirin'i news2dago @ 08:29, 2009-05-20 [Valio]
45 Ary nony nitsangana avy nivavaka Izy, dia nankeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matorin'alahelo.
46 Dia hoy Izy taminy: Nahoana no dia matory hianareo? Mitsangàna, ka mivavaha, mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy.
----> Jereo eto
Nampidirin'i lap @ 08:46, 2009-05-20 [Valio]
Tsy i Jentilisa irery no matoritory. Mandalo amin'ny fiainana izy io. Izaho izao amin'izao fotoana izao indray vao mifoha kely. Nandefa iny filazana avy aminay eto US iny aho io. Efa naka fotoana be ny fandrindrana azy iny (izay ilay lazaiko hoe matory). Toa hanantona anay aty indray ny tolona ato ho ato. Voatery hifoha aho izany. Ataoko fa tsy ho ela koa ny fifohazan'í Jentilisa. Raha afaka avoakanao ato amin'ny bilaoginao ny fanambarana nataonay dia mba ataovy azafady. Ny tanjona dia hanafana ny fon'ny olona aty an-tany lavitra aty.
Nampidirin'i Rolls @ 04:57, 2009-05-21 [Valio]
message hoany olona manga en puissance jentilisa
rehefa sendra nahita ny blog nao aho dia nieritreritra be mihintsy mbola misy tanora tohy izao eto madagasikara mahavelopanatenana tokoa mirotso be be kokoa amin'ny politika ianao satria ho lasa lavitra ianao ary mety ahavita zavatra be tokoa any madagasikara misaotranao na dia ny talenta eo amin'ny lahatsoratra koa dia tohizo ianao ilay petit prince de st exupéry malagasy raha mifanena tokoa aminao aho dia anotanio hoe "dessine moi un mouton" mbola ifanena aorina fa mbola lava ny tolona
Nampidirin'i nene @ 00:05, 2009-05-24 [Valio]